Bermuda yakavhurika bhizinesi inotevera Hurricane Humberto
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Bermuda yakavhurika bhizinesi inotevera Hurricane Humberto
Nhau Nhau • Bermuda Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Manheru apfuura, Hurricane Humberto, chikamu chechitatu dutu, chakapfuura mamaira makumi manomwe nemashanu kuchamhembe kwe Bhemudha, ichipa chiwi chitsuwa chine utano chemhepo nemvura. Asi maBermudian vane ruzivo rwakawanda mukutarisana nezviitiko zvemamiriro ekunze zverudzi urwu - anopfuura makore mazana mana echiitiko, muchokwadi. Nekuda kweizvozvo, kukuvara kwanga kushoma, kuchenesa kuri kuenderera, uye chitsuwa chakavhurika bhizinesi.
Iyo LF Wade International Airport (BDA), pamwe nemugwagwa (mugwagwa mukuru unoshandira airport), ese akavhurwa masikati nhasi. Ese Bermuda Visitor Services Centres ichavhurwazve neChishanu, uye basa rezvikepe pachitsuwa chose richadzorerwa Chishanu futi.
Pamusoro pezvo, ese maBermuda mahotera zvivakwa ari kushanda uye akagadzirira kugamuchira vaenzi. Kune vese vashanyi vane marongero avo akachinjwa nedutu, iyo Bermuda Hotel Association yekumisikidza vimbiso inobvumidza vashanyi kugadzirisa kwavo kwehotera pasina chirango. Tora rumwe ruzivo nezve garandi.
"Nendege yakavhurwa, kuchenesa kwavepo, uye kukuvara kuri kushoma, Bermuda yakagadzirira kugamuchira vashanyi nemapoka akatochengeterwa kushanyira kupera kwevhiki rino nekupfuura, pamwe neavo vakafemerwa kuti vadaro nedenga rebhuruu yanhasi uye tembiricha yakakwana pano, ”akadaro Kevin Dallas, CEO weBermuda Tourism Authority.
Kana iwe uri kuuya kuBermuda mukati memwedzi yekudonha, apo tembiricha inodziya inononoka, iwe uchasangana nezvimwe zvepakati peAtlantic zviwi zvinonakidza zviitiko zvekunze, chikafu chinonaka, uye zvakasarudzika zviitiko.
Spiny Lobster Mwaka: Kubva munaGunyana kusvika Kurume, tsvaga chaiko Bermuda chinonaka. Spiny lobster ndeyechokwadi inonaka yezvokudya zvegungwa.
Kuravira kweBermuda (Gumiguru 11-13): Vanoda zvekudya newaini havangade kupotsa iyi extravaganza yegore, inoratidzira kunwa waini, kufamba kwekushanya, kukwikwidza kwemazuva matatu kwashefu uye mutambo wezvese-wezuva une chikafu cheGuta. yeHamilton maresitorendi.
Bermuda Championship (Gumiguru 31 - Mbudzi 3): Chiitiko chepamutemo chePGA TOUR paBermuda chakakurumbira Port Royal Golf Course inopa kumashure kwemvura yakajeka, yebhuruu nemvura inoshamisa. Ichave terevhizheni yepasi rose paGorofu Channel.
• World Rugby Classic (Mbudzi 2-9): Vamwe vevatambi ve rugby vane mukurumbira pasi rose vanosangana kuBermuda pachiitiko chinokwezva vateveri vanofarira zvemutambo uyu.